Governor Iowa Kim Reynolds hiriira ilaalate gargaarsa dabalata osoo hin ajaajne dura bulchoota | KWIT
Manni fayyaa oficial akka himeti namni 3 sababa covid-19 dabalatan du’u hime, waliigalati sioux city naannowa metroti namni sababa covid-19 du’e 62 gaheera.
Magaaala Dakota County keessatti namni haarawa virasichan qabame 2 yoo ta’u waliigalatti 1,700 gaheera. Akkasumas magaala Woodbury county harawni 25 yoo ta’u waliigalati 2,800 gaheera.
Kampanin Tyson kan booyye storm Lake keessatti argamu namni qabame dabaluun oduun irra himamera. Hojattoota 2,300 kan facility keessa dalagu keessa hojjattooni 600 viyrisichan qabamuu gabaasani jiru. Kampanichi akka himeti hojjattoota isaa keessa 75% mallato dhukuba irrati hin mull’ane jedhan.
Harki saddaffaa hojatoota kan qabamanii turaan qulqulaahun dalaga deebi’aniiru.
Oomishnii muraawe borirraa itti fufa.
Hoggasuu kampaniin horii kan Dakota City keessatti argamu sochii isaa sutumaan guddisaa deemu jira. Hojattoota 4,300 keessa 800 varrasichan kan qabamanii turan ammas boqannamara jiruu.
Manni barumsa Iowa daa’imaa fi ijoole nyaata bonaa kanna kessa kennatuma jiran, umanni garuu addaan fagenyaa itumaa fuffu qabu fi sababa dhukuba kanaa nyaata kenuun March keessa jalqabe.
Manni barumsa aanaa Sioux City ijoole umrii isaani 1-18 ta’aniif nyaata kuma 250 ol kenaniiru.
Dura bu’aan tajaajila nyaata akka jedhetti, aanaan kuni guyyaati nyaata 4000–5000 kan gahu akka qoodan himan.
Aanaan mana barumasa qarra guyyaati nyaata 1,500 kan ta’uu nyaata qophesu ijoole bakka barumsatti nyaata ofii nyaachu qabu. Amaa garuu sababa covid-19 akka fudhatani galan godhameef, kunis ittuma fufa.
Iowan yeroo jalqabaatif bakka filannoo hanga sa’ati 9 har’a ni banaama.
Filattooni Republika akka jedhaniti Aanaan 4ffa kan mana martiittu murteesa yoo Steve King filanno ufdurati dhufuu yoo inni Democrat J.D. Scholten waliin kan walmormu ta’ee.
Magaala Woodbury keesati geggeesan filannoo sagalee keenudhaf gaafi dabalata gaafataniiru akka ummani karra xallayattin filattu. Sababa covid-19 bakka fillannoo 44 keessa magaala Woodbury county keessa 5 qofa baname. Har’a sa’aati booda bakka fillannon itti ademee Long Line Rec Center tti namni baaye akka qaaratti hin argamiin debataan.
Namni baay’e akka jedhanitti kuniis sababa dhufaniif fillaanno Woodbury sheriff kuni Republican lama walitti waan fiduuf jedhan, ka biraas namicha dalagaa yerro dheraaf dalagee Todd Wieck fi namicha qara poolisaa Sioux City turee Chad Sheehan degaruuf dhufaan.
Filannoon South Dakota ammo har’a sa’aati 8 p.m cufama.